पब्जी खेल्न नपाएपछि एक युवकले गरे भारतमा आफ्नै बुबाको हत्या !
Wednesday, 11 Sep, 2019 9:24 AM
२५ भदौ, काठमाडौं । भारतको कर्णाटकस्थित बेलगावी जिल्लामा एक २१ वर्षीय युवकले मोबाइल गेम पब्जी खेल्न नदिएका कारण आफ्नै बाबुको घाँटी रेटेर हत्या गरेका छन् ।
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सेजका अतिरिक्त प्रोफेसर डा. मनोजकुमार शर्माले बीबीसीलाई भने,‘जब आमा बाबुले बच्चासँग मोबाइल फोन फिर्ता लिन्छन् वा उनीहरुलाई गेम खेल्न दिँदैनन् त्यसले गेमको लतमा परेका बच्चालाई सबैभन्दा बढी असजिलो महसुस हुन्छ । उनीहरु चिडचिडाहट र रिस देखाउन थाल्दछन् ।’
डा. शर्मा अहिलेसम्म खेलका कारणले कसैको व्यवहारमा परिवर्तन आएको प्रमाण फेला नपरे पनि हिंस्रक गेम खेल्नाले उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आएको आफन्तहरुले बताएको उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार यसप्रकारको व्यवहारको मुख्य कारण मानिस बाहिरको दुनियाँसँग पुरै सम्पर्कविच्छेद्को अवस्थामा रहनु हो । उनीहरुले यही आफ्नो दुनियाँ भएको सोचिरहेका हुन्छन् ।
उत्तरी कर्णाटकको हुबलीस्थित मानस इन्स्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थका सिनियर मनोचिकित्सक डा. विनोद कुलकर्णी भन्छन, ‘हामीलाई ग्रामीण तहबाट पनि तीन चार सय मामिला त्यस्ता आएका छन् जसमा मोबाइल फोनका कारण समस्या परेको पाइएको छ । उनीहरुले मोबाइलको लतका कारण समस्या आएको बताउने गरेका छन् ।’
डा. कुलकर्णी भन्छन,‘यस खालका बिरामीलाई गेम नखेल भनिएमा त्यसले उनीहरुलाई चिन्तित बनाउँछ । उनीहरु हिंस्रक हुन थाल्छन् र तनावमा पर्न थाल्दछन् ।’
डा. शर्मा लतको शिकार भएका व्यक्तिलाई एकै झड्कामा लतबाट मुक्त गर्न असम्भव हुने बताउँछन् । यस्ता व्यक्तिलाई विस्तारै जागरुक बनाउन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । उनी त्यस्तो लत भएका बच्चालाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने समेत बताउँछन् । गेम खेल्नु खराब कुरा नभए पनि अति नै खेल्नुले भने समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ ।